Kalfadhigii 7aad Ee Golaha Xildhibaanada Degmada Hadhagaale Oo furmay. - Cakaara News
Kalfadhigii 7aad Ee Golaha Xildhibaanada Degmada Hadhagaale Oo furmay.
Hadhagaale,(cakaaranews),jumce, 7da October, 2016. Waxaa ka furmay hoolka shirarka ee magaalada hadhagaale ee xarunta degmada hadhagaale ee gobolka Siti kalfadhigii 7aad ee golaha xildhibaanada degmada hadhagaale.
Kalfadhigan ayaa waxaa ka soo qaybgalay kaabineega degmada hadhagaale, xubanaha golaha xildhibaanada degmada hadhagaale iyo marti sharaf kale. Waxaana kalfadhigan furay afhayeenka golaha xildhibaanada degmada hadhagaale mudane Daahir Xuseen Waabari oo ugu horayntii xaqiijiyay tirada kooramka xildhibaanada oo ay tiradoodu dhantahay 65 xildhibaan wuxuuna sheegay in ay kalfadhigan xaadir tahay 56 xildhibaan sidaas darteedna uu furan yahay kalfadhigan. Wuxuuna afhayeenku sharax kooban ka bixiyay waxqabadkii sanadka 2008TI ee xafiiska golaha xildhibaanada degmada hadhagaale , ka dibna waxa uu soo bandhigay ajandayaasha kalfadhigan oo ay ka mid yihiin, dhagaysiga iyo ansaxinta warbixinta waxqabadka maamulka degmada hadhagaale ee sanad miisaaniyeedka 2008TI iyo ansaxinta miisaaniyada sanadka 2009TI iyo dhagaysiga iyo ansaxinta warbixinta maxkamada degmada hadhagaale ee sanadkii 2008TI.
Waxaana la guda galay dhagaysiga warbixinta waxqabadka sanadka 2008TI ee maamulka degmada hadhagaale oo uu soo jeediyay ku simaha gudoomiyaha degmada hadhagaale mudane fadxi mahamed, Warbixintaa oo ahayd mid ku sar go’an guulaha maamulka degmadu ka soo hooyay guud ahaanba qorshihii u yaalay degmada ee dhinacyada adeegyada horumarinta bulshada sida biyaha, waxbarashada, caafimaadka, beeraha, nabaglayada iyo maamulka suuban.
Ka dib markii uu golaha xildhibaanada degmada hadhagaale dhagaystay warbixinadan lagana dooday ayaa waxaa dhamaan ajandayaashan lagu ansixiyay cod-buuxa.